#ecency Trending Posts - HiveLIST
Amazing Nature Contest: Thematic Challenge - #1/12/21. This post is ENTRY for this contest SEPTEMBER. Fall and when the month of September comes to us. It isabeautiful time of year when we enjoy the amazing beauty of nature. For the photographer, i
လူဆိုး ကျွန်တော် 2022 ခုနှစ်မှာ ရောင်းမည့် Hive 30 မှ 10.90 ဟိုက်ကို မြန်မာငွေ ငါးသောင်းကျပ်ဖြင့် ရောင်းချလိုက်သည်။ ကတိ မတည်ပါဘူးလို့ ပြောလည်း ခံရမှပ။ "မင်းစိတ်ဆိုးလည်း ဆိုး
ယနေ့ စားဖွယ်စုံ ယနေ့တော့ Hive ဈေးက နှစ်ဒေါ်လာအနီး ရောက်ရှိနေသည်မို့ အဖွဲ့သားတွေ အေးဆေး ငြိမ်နေကြသည်။ Massager မှာ ပွဲ သိပ်မဆူတော့။ ကိုယ်အတွေးနဲ့ ကိုယ် ငြိမ်နေကြသည်။ ဒီနေ့တော့ အလှည့်အပ
2022 ခုနှစ်ကို ကံစမ်းခြင်း Hive ဈေးလေးတက်တော့ ရောင်းရမလို၊ မရောင်းရမလို လို လို တွေဖြစ်နေသည်။ ကိုဟင်က ပါဝါဒေါင်းပြီး ရောင်းချင်သပ ဆိုလည်းရောင်းပါဟု မနေ့က ပိုစ့်မှာ ရေးတင်ထားသည်။ Hive 100 ကို ယခု
ဒီဇင်ဘာ ဗွီးရှင်း "တကယ်ဆိုရင် ကိုယ်ကလည်း ချစ်မိနေပြီး ဖွင့်ဟဖို့ အပြောခက်သည်၊ မျက်လုံးချင်း စကားပြောနေပြီး" အဲ့မှာ တွေ့တာပဲ မျက်လုံးချင်းစကားပြောဖို့ "မျက်လုံးမှ မျက်လုံး စကားပြောနေ
ကမ္ဘာတွင်ထင်ရှား သမိုင်းဝင်ခေါင်းလောင်းကြီးများ ဒီနေ့တော့ မင်းကွန်းခေါင်းလောင်းကြီးအပါအဝင် ကမ္ဘာမှာထင်ရှားတဲ့ခေါင်းလောင်းကြီးများ အကြောင်း တင်ပြချင်ပါတယ်။ ယခုဖော်ပြပါအချက်အလက်များအနက် မင်းကွန်းခေါင်းလောင်းကြီးရဲ့…
ဝါသနာနှင့် ကျန်းမာရေး လွန်ခဲ့သော ငါးနှစ်ကျော်လောက်က ကျန်းမာရေးအတွက် ကျုံးဘေးမှာ နေ့စဉ်လမ်းလျှောက်ဖြစ်သည်။ အမှန်တကယ်က တကယ်ကျန်းမာရေးလိုက်စားချင်လို့လျှောက်ခြင်းမဟုတ်။ သူငယ်ချင်းက ကျမကျန်းမာရေးကို…
နှင်းမေတ္တာသွန်း-၄ ၅လ## အိမ်ပြန်ရောက်တော့..သမီးလေးတို့အရွယ်ဟာ တရက်နဲ့တရက်ကို အပြောင်းအလဲအရမ်းမြန်တဲ့အရွယ်ဆိုတော့..အဖေ့အပေါ်ဆို သိပ်မလိုက်ချင်လာတော့ဘူး ။ညနေတိုင်အဖေကျောင်းကပြန်လာချိန်ဆို မျှော်နေတက်တဲ့သမီးခုဆို..အဖ
ချစ်တတ်သူနှင့် အချစ်မတတ်သူ ယောင်္ကျားတွေရဲ့အချစ်က မရခင်တစ်မျိုး၊ ရပြီးတစ်မျိုးဆိုတာ တကယ်မှန်တာပဲ။ အယ်….ဒီလိုပြောလို့ ကိုယ်တွေ့လားလို့ မထင် လိုက်နဲ့အုံးနော်။ ကိုယ်တွေ့မဟုတ်တဲ့ သူများတွေ့ရှင့် သူများတွေ့။…
Hive BR Talk #4 - Novidades Fala galera! Dia de Hive BR Talk! ![lctxr7u1xkaapbh3qwmezeimaxecsvo91h6dduavt2pqekxparccskpmb6bqemtzhjivl6muvxwzcrmwxbiuhuqqspqhqhmtygtb7xcw5mq7a3znzelopo9kwcrburvcxll2eiyyww5bmptifylraq6db.gif](